XOG RASMI AH: Mooshin ka dhan ah Xukuumada Faderaalka Soomaaliya oo qoritaankiisu ka socdo Muqdisho iyo Kheyre oo bilaabay. – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Mooshin ka dhan ah Xukuumada Faderaalka Soomaaliya oo qoritaankiisu ka socdo Muqdisho iyo Kheyre oo bilaabay.
September 11, 2018 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Kulamo xasaasi ah ayay leeyihiin mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya iyo Xisbiyada Mucaaradka, kuwaas oo ay uga hadlayaan arrimaha siyaasadeed ee hadda ka taagan gudaha dalka, waxayna si gaar ah diiradda u saarayaan waxqabad xumida xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Cali Kheyre.
Xildhibaanada mucaaradka iyo qaar kale oo hadda ku biiray ayaa xooga saaraya in ay mooshin ka dhan ah Raysalwasaaraha Xukuumada Faderaalka Xasan Cali Kheyre, waxayna ku eedeynayaan arrimo kala duwan oo ay ugu horeeyaan dagaalka culus ee uga furmay dawlad gobaleedyada.
Mudanayaal katirsan Aqalka Sare iyo Siyaasiin caanka ah siyaasadda gudaha ayaa ciyaaraya dadaalkii ugu adkaa, waxayna kulamo kala gedisan la qaadanayaan Xildhibaanada, si looga dhaadhiciyo qorshaha la xariira mooshinka cusub.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in Xildhibaano gaaraya 95 Xildhibaan ay hadda diyaar u yihiin, meelmarinta mooshinkan oo ay dhabaha u xaarayaan, waxaana eedahooda kasokow ay doonayaan in uu qabto guddoonka baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya oo hadda u janjeera dhinaca Xukuumadda.
Dawlad gobaleedyadu waxay ciyaarayaan door aan sahlaneyn, waxaana kamid ah Madaxweynaha HIrshabelle, Galmudug, Puntland, Jubbaland & Koonfur Galbeed oo intuba doonaya in ay meesha ka saaraan Xukuumadda oo ay rumeysan yihiin in ay ku fashilantay arrimaha muhiimka ah.
Burburinta Hay’addihii Garsoorka, Maxkamaddaha, NISSA, Hanti Dhawrkii guud, Amniga gudaha, La dagaalanka Al- Shabaab iyo Doorashooyinka oo dhan ayaa kamid ah arrimaha lagu haysto Xukuumaddu in aysan waxba ka qaban, waxaana meel adag gaartay xiisadda siyaasadeed.
ARRIMAHA SIYAASADDA KALA SOCO RIIX HALKAAN